धनकुटा नगरपालिकाः ५ वर्षका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नेलाई किन भोट ? - Everest Dainik - News from Nepal
धनकुटा नगरपालिकाः ५ वर्षका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नेलाई किन भोट ?
धनकुटा, २० बैशाख । २०७४ को स्थानीय चुनावमा धनकुटा नगरपालिका प्रमुखमा एमालेका चिन्तन तामाङ कांग्रेसका दिनेश राईलाई १ सय १४ मतले पछि पार्दै विजयी भए। तामाङले ४ हजार ९ सय ३३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने नेपाली कांग्रेसका दिनेश राईले ४ हजार ८ सय १९ मत ल्याएका थिए। एमालेको वर्चस्वस्थल भएका कारण तामाङलाई नगरको प्रमुख हम्मेहम्मे पर्‍याे ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तामाङ र राईको भिडन्त हुने पक्का भएको छ। तर, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुअधि तामाङले धनकुटा नगरबासीसमक्ष धेरै प्रतिवद्धता गरेका थिए। ती प्रतिवद्धता ५ वर्षको समयावधिमा तामाङले पूरा गर्न सकेनन्।
चुनावअघि तामाङले धेरै प्रतिवद्धता गरेका भए पनि निर्वाचन जितेर गएपछि सानो टीममा फसेको आरोप पनि लागेको थियो। हुन त तामाङ धनकुटा जिल्लामा कम विवादित जनप्रतिनिधिमा पर्छन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला तर, उनले बाचा गरेका वा प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका धेरै काम अधुरै रहेका छन्। त्यो प्रतिबद्धतामा भएका काम पूरा गर्न फेरि पनि उम्मेदवार बनेको उनी दाबी गर्छन्।
हुन त सत्तामा बस्नेसँगको स्वाभाविक गुनासो धनकुटावासीमा पनि प्रशस्त देखिन्छ। उनीसँग आशावादी धेरैले निराशा प्रकट गर्न थालेका छन्। ‘पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि नगरको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सकेन,’ धनकुटा–५ गोविन्द राई भन्छन्, ‘हिजो युवा व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा हामी खुसी थियौँ, कार्यकाल सकेर बिदा हुँदा त्यो खुसी पुष्टि हुने काम भएन।’ उनका अनुसार ‘नगरी नहुनेमा भन्दा बढी नगरे पनि हुने’ काममा नगर अल्झियो। प्रमुख तामाङको शैली ‘प्रचारमुखी’ भयो भन्ने धेरै स्थानीयको टिप्पणी छ। जस्तो कि, कोरोनाकालमा औषधि बोकेर तामाङ घरघरै धाए। ‘स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले यस्ता कामका लागि सिस्टम र संयन्त्र बनाउने हो, आफैँ देखिने लोभ गरेर अरु काममा असर पु¥याउने होइन,’ धनकुटा–२ का भक्त बहादुर भण्डारीले भने, ‘धनकुटामा पाँच वर्षमा सिस्टम बसाल्नेमा तामाङको ध्यानै गएन। सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा वा सार्वजनिक चासोका क्षेत्रमा, कतै सिस्टम देखिएन।’
तामाङले नगरको नेतृत्व गरेपछि भएको प्रदेश र संघिय निर्वाचन पछि लामो समय नेकपा नेतृत्वको प्रदेश र संघ सरकार हुँदा पनि तामाङ केही फाइदा लिन सकेनन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवार क्रमशः चिन्तन तामाङ र शकुन्तला बस्नेतले ३४ बुँदाको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए। त्यो घोषणापत्र अहिले उनीहरुकै लागि गलपासो बनेको छ। घोषणापत्रमा नगरले नगरे पनि हुने वा गर्नै नसक्ने कामका वाचा धेरै थिए। घोषणापत्रमा लेखिएका कतिपय योजना कार्यान्वयन गर्नु नगरको बुताबाहिर थियो। नगरको नेतृत्व हात पार्न असम्भव योजनाहरूको बिस्कुन थियो। घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै योजना सुरु नै भएनन्। कतिको त चर्चा समेत भएन।
घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा ‘धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन दृढ पहल गर्नेछौँ’ लेखिएको थियो। जब कि विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी तोकेपछि स्थानीय तहको काबुमा नरहेको विषय वा कांग्रेसले अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकेकाले धनकुटा ल्याउन नसकेको बताउन थालियो। तर, धनकुटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा जुन पार्टीको बहुमत थियो धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पनि त्यही पार्टीका धेरै थिए अझ सो पार्टीको प्रदेश संसदमा दुइतिहाइ बहुमत रहेको थियो। त्यति हुँदा पनि धनकुटा राजधानी बनाउन पहल भएन।
घोषणापत्रको बुँदा नं. ११ मा धनकुटा अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाई नर्सिङ कलेजको रुपमा स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। तर, ५ वर्षमा यो विषयमा कुनै काम नै भएन। यो विषयमा तामाङले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अस्पतालमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताए।
धनकुटा नगर प्रमुख तामाङले चुनावमा होमिदा घोषणापत्रमा धेरै प्रतिवद्घता प्रेषित गरेका थिए। ती मध्ये धेरै प्रतिवद्घताहरुले ५ वर्षको अवधिमा पनि सार्थकता पाउन सकेनन्। धनकुटा नगरबासीलाई शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति गरिनेछ भनेर मत मागेका तामाङले खानेपानीको विषयमा उल्लेख्य काम गर्नै सकेनन्। धनकुटा खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष समेत बनेका तामाङले उपभोक्ता समितिमार्फत् पहिले नै सञ्चालनमा रहेको खानेपानी समितिमा कार्यकर्ता भित्र्याउने बाहेक केही गरेनन्। धनकुटा बजारबासी धनकुटाको ताङ्खुवा खोला र निबुवा खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् तर, त्यसको परीक्षण भएको छैन। बर्खामा लेदो पानी वितरण गर्ने गरिएको छ। चौबिसै घण्टा पानी उपलब्ध गराउने भनी न्युनतम मासिक शुल्क ४ सय रुपैयाँ तोके पनि पानी फोहोर र अपुग रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
तामाङको घोणषापत्रमा प्रत्येक वडाहरुमा कम्तीमा १÷१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना र वडा ६ मा भएको औद्योगिक ग्रामलाई यथासक्य चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको भए पनि वडामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छैन। तामाङले नमुनायोग्य आवास गृहहरुको विकास गरी सुकुम्वासी, घरवारविहीन मजदुरलाई सहुलियत किस्तामा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर ५ वर्षमा त्यसको सुरुवात नै भएन। नगरपालिकामा बजेट कम भएर सबै काम गर्न नसकेको तामाङ बताउँछन्।
तामाङले २०७४ को निर्वाचनमा जाँदा आधुनिक बधशाला, आधुनिक बजार, उपभोक्ता भण्डार बजार, मिनी मार्केट, कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालनजस्ता विषय सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, ५ वर्षे कार्यकालमा उनले यी कुनै पनि काम गर्न सकेनन्। बजारमा बिचौलियाकै हालिमुहाली छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गमा प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति हुने कार्यक्रम ल्याइने छ भनेर प्रतिवद्धता जनाएका तामाङले आसेपासे र कार्यकर्तालाई राम्रै भरणपोषण गरेको आरोप छ भने नगरपालिकाले वितरणमुखी बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ। जो मानिस बिरामी छु भनेर नगरपालिका गयो भने यथार्थ नबुझी २ देखि ५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेका थिए।
धनकुटा नगरपालिकामा तामाङको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै पनि काम भएनन्। प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भनिएको रकम ल्याउन तामाङले सकेनन भने वर्षाका कारण भएको धानबाली क्षति हुने किसानले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन। धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ८ यात्तेमा एउटा गाउँ नै पहिरोको जोखिममा छ। गाउँमा ठूलो पहिरो गएपछि घर तथा बारी चिराचिरा परेपछि स्थानीयले हार गुहार गर्दा पनि वस्ती स्थानान्तरण गर्ने भने अहिलेसम्म अवस्था उस्तै रहेको स्थानीय बताउँछन। वर्षाको समय आएपछि स्थानीय अर्को गाउँमा शरण लिन जानुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयले दुर्गा राईले बताए।
धनकुटा नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा २०७४ सालमा तामाङले आधुनिक सार्वजनिक शौचालय र घुम्ती शौचालय बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, ५ वर्षमा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय र घुम्ती शौचालय सञ्चालनमा आउन सकेन। धनकुटा वसपार्क र बिहीबारे हटियामा तामाङ प्रमुख हुनुभन्दा पहिले बनेको सार्वजनिक शौचालय बाहेक धनकुटा नगरपालिकामा कुनै सार्वजनिक शौचालय छैन।
धनकुटाको सार्वजनिक पार्क चौकमा फ्री वाइफाइको व्यवस्था गर्ने तामाङको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ तर धनकुटा नगरपालिका ६ मा रहेको एभोकाडो पार्कमा राखिएको भए पनि ६ महिना नपुग्दै बिग्रिएको छ।
भ्यु टावर मोह
नगर प्रमुख तामाङको ५ वर्षे कार्यकाल भ्यु टावर मोहको रुपमा देखिएको छ। तामाङले आफ्नो वडा धनकुटा १ हिलेमा भ्यु टावर निर्माण गरेका छन् भने अर्को धनकुटा नगरपालिका ७ चुलीवनमा भ्यु टावर निर्माण गरेका छन्। तर, ती भ्यु टावर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म धनकुटा नगरपालिकामा फछ्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु २० करोड ७८ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। केही ठाउँमा सार्वजनिक कामका लागि जग्गा खरिद गरेको र त्यो जग्गा खरिद गरेको रकम बेरुजु आएको प्रमुख तामाङले दाबी गरे। नगरले आफुलाइ महसुस हुने कुनै राम्रो काम नगरी व्यथितिको केन्द्र बनाएको धनकुटा नगरपालिका वडा नं ५ निवासी सुजनभाई जोसीले बताए। उनले नगर प्रमुख तामाङको कार्यकालमा दलाल प्रवृत्ति देखाएको र आफ्नै छोरालाई ७ वटा समितिमा कोषाध्यक्ष बनाई बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए।